Tun Tun's Photo Diary: Singapore Chingay Parade 2014
ဒီပွဲကို Singapore Flyer ဘေးက F1 ကွင်းမှာ လုပ်တာပါ။ ကတဲ့လူတွေ ည၈နာ၇ီထိုးမှ ထွက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့စိတ်ထင် ကွင်းပြင် အကြီးကြီးမှာ လုပ်ရင် ပိုပြီး ကြည့်လို.ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ကြည့်ရတာ ကတဲ့ လူတွေ နည်းနည်း ကြပ်နေသလားလို.။ ဒါပေ့မယ် စင်ကာပူက နေရာအရမ်း ရှားတာကိုး။
ဒီရောင်စုံ အဖွဲ.ကပြ နေရာယူပြီးတော့ စင်ကာပူ ၀န်ကြီးချူပ် လီရှန်လွန်း နဲ.ဇနီး အလှပြကားနဲ. ကြွေ၇ာက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို.အတွက်ပြင်ထားတဲ့ VIP နေ၇ာ မှာ ထိုင်ပြီး ပွဲပြီးတဲ့ အထိ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့နေ.က 07-Feb-2014 သောကြာနေ.။ 08-Feb-2014 စနေ.နေ.ညလဲ ထပ်က ဦးမှာ။ ဒါပေမယ့် စနေနေ.မှာကျတော့ စင်ကာပူ သမ္မတ တိုနီတန် လာရောက်အားပေးမှာလို.သိရပါတယ်။ ။
စင်ကာပူမှာနေတာ ကြာပြီဆိုပေမယ့် အခုမှပဲ ၀န်ကြီးချူပ်ကို အပြင်မှာ မြင်ဖူးတော့တယ်။
မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် ဘယ်သူ ဘယ်ဝှာမှန်း မသိပါဘူး။း)
ဒီအဖွဲ. အရမ်းမိုက်တယ်။ သစ်သားခြေအတုတွေနဲ. ပြီး တော့ သူတို. ကိုယ် (နောက်ကျော) ကနေ မီးရူးပန်းတွေဖောက်သွားတာ အရမ်းလှတယ်။ အနီးအနားလူတွေ မီးပွားစင်မယ်ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော့ နေရာကနေတောင် အပူ ရှိန် နည်းနည်းတယ်။ ယမ်းနံ.တွေလဲ ထောင်းနေတာပဲ။
အဲဒီ အလံအရှည်ကြီးနဲ. ကတာလဲ အရမ်း အသည်းယားဖို.ကောင်းတယ်။ အလံက လေးတော့ ငိုက်ငိုက်ပြီး ကျလာတယ်။ သူတို.က မနည်း နိုင်အောင် ထိန်းနေရတာ။ ပြုတ်ကျ၇င် ပရိတ်သတ်တွေပေါ် သေချာ ကျတယ်။ ကျွန်တော့် ရှေ.နားမှာ ပြုတ်ကျတော့ မလို ခဏခဏ လုပ်ပြတယ်။ ခေါင်းကျိန်းတယ်ဆိုတာ ဒီလို ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်မယ်။း)
ဒီဘဲလေး ကတဲ့ အဖွဲ. အရမ်းလှပါတယ်။ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးမှာဆို ဘယ်လောက်တောင် လှလိုက်မလဲ။
Eurasian အဖွဲ. အလံတွေ လေထဲမှာ ပစ်ပြီးကတာ အရမ်းလှတယ်။ ဒီဖက်က ပစ် ဟိုဖတ်က ဖမ်း။ ဟိုဖက်ကပစ် ဒီဖတ်က ဖမ်း။
ဒီိပိတ်စတွေ ဖြန်.ပြီး က တဲ့ အဖွဲ. Professional အဆန်ဆုံးပါပဲ။ေ၇ာင်စုံ ပိတ်စ ကြားထဲ လူတွေ ၀င်သွားလိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက်နဲ.။ နောက်ဆုံးကျတော့ အဲ့ဒိပိတ်စတွေနဲ.ေ၇ာင်စုံအကွက်ပုံဖြစ်အောင် ပုံဖော်သွားတာပါ။ မြင်သာအောင် ပြောရရင် မြန်မာပြည်က ယက်ကန်းယက်နေသလိုမျိုးပေါ့။ အပေါ်စီးကနေ မြင်ရရင် သိပ်လှမှာပဲ။
အဲ့ဒီ တုတ်နဲ.ထိုးထားတဲ့ အရုပ်ကြီးက ကုိုယ့်အေ၇ှ.ေ၇ာက်လာတော့ ကြောက်စရာကြီး။း)
နောက်ဆုံးမှာ ဟောဒီလို ပိုက်ကွန်လိုဟာမျိုး လုပ်ထားတဲ့ ONE HEART ဆိုတဲ့ ဟာတွေ ဖြန်.ချလိုက်ပြီး။ မီးပန်းတွေ ဖောက်ပြီး ပွဲ ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ သန်.၇ှင်းေ၇းသမားတွေ တော့ သက်သာမယ်မထင်။ မနက်ဖြန်ပွဲအတွက် ဒါတွေ ကို အမြန်သန်.ရှင်းေ၇းလုပ်ရဦးမယ်။း)
at 2/15/2014 09:19:00 PM
Whatabeautiful and colorful event!
I didn't know about it and have never seen before.
Thanks much for sharing the photos.
Tun Tun February 22, 2014 at 10:34 PM
Thanks you for your kind comment. :)